IGoogle Inovaka Sei Mawindo Ayo Webhupu? - Semalt Mhinduro
Kurapa kwewebhu kwakave basa rinokosha mumasangano ose nekuda kwezvizhinji. Kunyange zvazvo inenge ikambani yose inobatsirwa nayo, inonyanya kukosha web scraping iGoogle.
Google's yekushandisa zvishandiso zvewebhu inogona kuiswa mumapoka matatu makuru, uye ndeiyi:
Google crawlers inozivikanwawo seGoogle bots. Izvo zvinoshandiswa pakutsvaga zviri mukati peji peji rese pawebhu. Kune mabhiriyoni emapeji ewebhu pawebhu, uye mazana ari kutorwa muminiti imwe neimwe, saka Google bots inofanira kukwidza mapeji ose nekukurumidza sezvinobvira - hankook renkaat tampere airport.
Tsamba idzi dzinomira pane dzimwe nzira dzekugadzirisa kuti nzvimbo dzigone uye mapeji ewebhu anotsvaga. Dzinotangira kubva pane urongwa hwe URLs dzakave dzichibva pane zvekare zvakakwira. Maererano nekugadzirisa kwavo, mabhodhi aya anoona kubatana kwepaji rimwe nerimwe sezvavanokamba uye kuwedzera hukama kune mazita emapeji kuti apiwe. Kunyange vachicheka webhu, vanocherechedza nzvimbo itsva uye dzinovandudzwa.
Kugadzirisa kusawirirana kwakafanana, Google bots hadzina kukwanisa kutumira mawebhusayithi. Ndiyo basa reGoogle index. Mabhoti anongotarisana nekuwana mawebvu mukati memhemberero yakareba kupfuura nguva. Pamagumo ekukamba kwavo, Google bots vanotumira zvinhu zvose zvakagadzirwa kubva pamapeji epaGoogle index.
2. Nhamba yeGoogle Index
yeGoogle index inogamuchira zvinyorwa zvese zvakatsvaga kubva kuGoogle bots uye zvinoshandisa iyo kutarisa mapeji ewebhu akamborwa. Google index inobudisa basa iri zvichienderana nehurongwa hwayo. Sezvambotaurwa, Google index inowedzera mawebsite uye inotumira mapeji ekutsvaga mavhareji emigumisiro. Mawebhusayithi ane mazinga akakwirira ye niche yakasiyana inotanga kuwanikwa mumapeji ekutsvaga mukati mechikamu ichocho. Izvo zvakajeka sezvo.
3. Kutsvaga kweGoogle Kutsvaga Vashumiri
Kana munhu anoshandisa mamwe mazwi makuru, mapeji ewebhu anonyanya kukosha anoshandiswa kana kudzorerwa nenzira yekukosha kwavo. Kunyange zvazvo shanduro inoshandiswa kutsvaga kukosha kwewebsite kunotsvaga mazwi makuru, haisi iye chete chinhu chinoshandiswa mukugadzirisa zvakanakira. Pane zvimwe zvinhu zvinoshandiswa kugona kuenderana kwemawebhu.
Chimwe nechimwe chekubatanidza pane peji kubva kune dzimwe nzvimbo kunowedzera chikwata uye kukodzera kwepeji. Zvisinei, zvose zvisungo hazvienzani. Nzira dzakakosha kupfuura dzose ndeyo dzakagamuchirwa nekuda kwehutano hwehuwandu hwepeji.
Pamberizvino, nhamba dzenguva imwe izwi guru rinowanikwa paji yewebhu yakashandiswa kusimbisa nzvimbo ye peji. Zvisinei, haichazoiti. Ikozvino zvinokosha kuGoogle ndiyo hutano hwehupenyu. Zviripo zvinofanirwa kuti zviverengwe, uye vaverengi vanongokwezva chete nehuwandu hwehuwandu uye kwete mazhinji mazita ekuona mazita. Saka, peji yakakosha yega yega mubvunzo inofanira kuva nepamusoro yepamusoro uye inotanga kutanga pamigumisiro yemubvunzo iwoyo. Kana zvisina kudaro, Google icharasikirwa nekuvimbika kwayo.
Pakugumisa, chimwe chinhu chinokosha chinobviswa kubva munyaya ino ndechekuti pasina webhutema, Google nedzimwe injini dzekutsvaga dzichadzoka pasina chigumisiro.